गाउँमा नयाँ मान्छे देखिए सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नू: स्वास्थ्य मन्त्रालय - Sidha News
गाउँमा नयाँ मान्छे देखिए सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नू: स्वास्थ्य मन्त्रालय
‘तपाईँको टोल छिमेकमा अथवा गाउँघरमा कुनै नयाँ मान्छे आएको छ भने छिमेकीहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कम्तिमा पनि सात दिन क्वारेन्टाइनमा बसाल्न अनुरोध गर्दछौँ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शुक्रबार भने।
मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा डा. गौतमले नयाँ व्यक्तिलाई ७ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र कोरोना भाइरस संक्रमित वा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति घर बाहिर निस्किएमा तुरुन्तै प्रहरी कार्यलयमा खबर गर्न अनुरोध गरेका छन्।
दसैं नजिकिदै गर्दा केही दिन यता मानिसहरुको चहलपहल निकै बढेको छ जसले गर्दा विभिन्न ठाउँमा भिडभाड हुन थालेको छ। धेरै भिडभाडमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै अनावश्यक जमघट नगर्न मन्त्रालयले बारम्बार भन्दै आइरहेको छ।
तर मानिसहरु यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै दसैंको किनमेलमा तँछाड्मछाड् गरिरहेको छन्। संक्रमणको डर नमानी उनीहरु पहिला जसरी नै जुटिरहेका छन्। उनीहरुलाई हेर्दा लाग्न सक्छ- अब नेपालका कोरोना भाइसरको संक्रमणको जोखिम कति पनि छैन।
संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दै दसैं मनाउनका लागि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ यात्रा गर्न थालेका छन्। यस्तै यात्रा गरेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न डा. गौतमले सुझाव दिएका हुन्।
एक ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ पुगेको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न सरकारले गरेको अनुरोध उपयुक्त भएको इपिडिमियालोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले बताए।